Tuesday .4August . 2020
သန်းကြွယ်သူဌေးမအားသတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားသော လူသတ်မှုနှင့်ပါတ်သက်သည့်တရားခံအား ၂ ရက်အတွင်းဖမ်းဆီးရမိ
၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာ ၃၀
ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်ပြည်နယ် ကျွမ်ထောင်းမြို့နယ် ဘန့်လွမ်ကျေးရွာအုပ်စု ရပ်ကွက် ၃ ၊ ချင်းမိုင် - ဟော့တ် လမ်းကြီးဘေးရှိ ၃ထပ်တိုက် Apartment အခန်းအမှတ် ၉၀/၃ တွင် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့က ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သေဆုံးနေသည့်လူသတ်မှုနှင့်ပါဝင်ပါတ်သက်သည့် တရားခံများအား ၂ ရက်အတွင်းရဲတပ်ဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးသိရှိခဲ့ရပြီး အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်သည့် နိုင်ဝိထွန်း စီတဘွတ် ( ခ) သမ့် ( ခ ) အမ် (၃၉) နှစ်အား အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့ ၁၇:၀၀ ချိန်တွင် ချင်းမိုင်လေဆိပ်၌ တာဝန်ရှိသူရဲတပ်ဖွဲ့မှဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရ ။
နိုင်ဝိထွန်းသည် သေဆုံးသူ၏ BMW ကားအဖြူရောင်ကိုမောင်းနှင်ပြီး ATM BOX များတွင်ငွေများထုတ်ယူခဲ့ပြီးတစ်ကြိမ်လျှင် ဘတ်ငွေ ၂ သောင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာထုတ်ယူပြီး စုစုပေါင်းဘတ် ၁၂ သိန်းထုတ်ယူခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး ကားကို လမ်းမကြီးနှင့်ပေ ၁၅၀ အကွာတွင်ရပ်တန့်ထားကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှသတင်းရရှိခဲ့ပြီး လက်ဗွေရာများရယူပြီး လန်ပန်းမြို့မှ၎င်း၏ဇနီးဟောင်းအားသွားရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းရာ ATM ထုတ်ယူစဉ်ဝတ်ဆင်ထားသောဖိနပ်မှာ ဝိထွန်း၏ဖိနပ်ဖြစ်ကြောင်း သူမ မှတ်မိကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပါသည် ၊ ထိုနေ့မှာဘဲဘတ်ငွေ ၅ သောင်းနှင့် ရွှေ ၂ ဘတ်သားပေးခဲ့ကာ ထွက်သွားခဲ့ကြောင်းဆိုသည် ။
ဝိထွန်းသည် လူသတ်မှုဖြင့်ထောင်ကျခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပြီး ယခုအခါလိုင်းကားအဝါရောင်မောင်းနှင်ကာ သေဆုံးသူနှင့်ယခင်ကအခန်းခြင်းကပ်လျက်နေထိုင်ခဲ့ပြီး သေဆုံးသူအား မကြာခဏအကြိုအပို့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ရသည်ဟုဆိုပါသည် ၊ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် သေဆုံးသူ၏အိမ်ရှေ့တွင်သွားရောက်စောင့်ကြိုနေခဲ့သည်ဟုထွက်ဆိုသည် ၊ ၁၂/၁၃ ရက်နေ့တွင် အလှူကြီးရှိသော်လည်း သေဆုံး မစ္စဝမ်းနီးသည် အိမ်ထဲကထွက်မလာတော့ကြောင်းသိရှိရသည် ။
ဝိထွန်း၏ထွက်ဆိုချက်အရသူကိုယ်တိုင်မသတ်ရဘဲ သူ့အားဘတ်ငွေ ၃ သိန်းပေးကာ အလောင်းဖျောက်ခိုင်းခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည် ၊ သေဆုံးသူနှင့်နီးစပ်သူ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူ မိန်းမသျှာမှ စီစဉ်ပြီး နောက်ထပ်အမျိုးသားတစ်ဦး အိုက်သွန့်ဆိုသူက သတ်သည်ဟုဆိုပါသည် ။
ဝိထွန်းသည်သေဆုံးသူ၏အိမ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ကာ အလောင်းအားရေခဲသေတ္တာထဲသို့ထည့်ရသည့်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရသည့်အပြင် CCTV များကိုဖြုတ်ရသည်ဟုဆိုပါသည် ၊ Tom Boy ( ခ) အုမ့်သည်နိုင်ငံခြားသို့ရှောင်ပြေးသွားပြီဟုကြားသိရ ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ တရားခံအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်သူဟုသိရှိရသည် ။
တရုတ်မှ ထူးဆန်းတဲ့ မျိုးစေ့တွေ အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ဝန်းကပြည်သူတွေဆီကို စာတိုက်ကနေရောက်ရှိလာ